Unyana wam uthetha yedwa, ngaba yinto eqhelekileyo le? | Oomama Namhlanje
UAna L. | | ekufundeni, Intsapho
Ukuba umntwana wakho uthetha yedwa, oko kukuthi, uthetha yedwa, ungakhathazeki kakhulu. Kwiminyaka ethile, ukongeza kokuqhelekileyo, iyimfuneko. Kwaye soliloquies sisixhobo sokusombulula iingxaki. Intetho yabucala idlala indima entle ekukhuleni kwengqondo eqhelekileyo yabantwana. Siza kuthetha nawe ngale micimbi namhlanje, kunye nendlela onokuthi usebenze ngayo njengomama.
Ngakolunye uhlangothi, ngakumbi, amakhwenkwe kunye namantombazana ane-Down syndrome axhomekeke kwisiloloquy njengendlela yokubonisa, usizi, unxunguphalo kunye nokuba yedwa. Ubuncinci yile nto iboniswa zizifundo ezahlukeneyo. Iluncedo olukhulu kubo. Bavame ukucinga ngokuvakalayo ukuqhubekeka neziganeko zobomi bemihla ngemihla.
1 Isoliloquy ngokwembono yeengqondo
2 Umkhwa wokuhlala yedwa emntwaneni
3 Ungaziphatha njani njengomama xa uthetha nomntwana wakho yedwa
Isoliloquy ngokwembono yeengqondo
Ukusuka kwindawo yokujonga kwengqondo, isoliloquy inokuchazwa ngeendlela ezimbini ebudaleni: inoluhlobo oluthile lokuphazamiseka okanye ngumntu ohleli yedwa kwaye ufuna ukuveza ezinye izimvo ngokuvakalayo. Oku ubuncinci kwenzeka ntoni kubantu abadala, kodwa Iingxoxo zodwa zihlala zikhona ebantwaneni, ngakumbi ngexesha lesigaba se ukuvela kolwimie.
Kukho abantwana abakholwayo abahlobo bokucinga xa bengasondelanga kwabo babedlala nabo, kwaye bencokola nabo, ezinokubonakala okanye zibe zodwa. Kodwa umntwana akaziqondi ukuba zinjalo. Ngamanye amaxesha isoliloquies sikhatshwa kukungaziphathi kakuhle okanye isimilo esingaqhelekanga, kunye nothintelo oluthile lwe-autistic. Kwezi meko isolo lithathwa njengenxalenye yeempawu zezifo eziphambili.
UVygtosky, ugqirha wezengqondo waseRussia, uchaze unxibelelwano olusondeleyo phakathi kwamava entlalontle, intetho kunye nokufunda. Inyaniso umnqweno wokuthetha wedwa awupheli. Ngalo naliphi na ixesha apho wena, okanye umntwana wakho ujongene neemeko ezingaqhelekanga okanye imisebenzi yokufunxa, iya kuhlala iphinda ibuye. Kwimeko nayiphi na into, yabantu abadala okanye abantwana, kwisiloloquy kukho into ebonakalayo.
Umkhwa wokuhlala yedwa emntwaneni
Ukuba ubukele umntwana wakho ethetha yedwa Akuthethi ukungazinzi kwengqondo, okanye uphawu lokungathobeli okanye ukuphazamiseka. Ke ngoko, akufuneki umntwana akhalinyelwe xa ethethela phezulu kwaye eyedwa. Isoliloquy inceda abantwana baqondise isimilo sabo, bajongane neemeko ezingaqhelekanga kwaye, njengoko besesitshilo ngaphambili, bafumane izakhono ezitsha.
Ngokwezifundo ezahlukeneyo kwizithethi ezizodwa, eziye zanda ukusukela ngeminyaka yoo-80, abantwana abakumgangatho ophakathi bathetha bodwa ukwanda rhoqo phakathi kwe-4 kunye ne-6 yeminyaka yobudala. Ngexesha lesikolo samabanga aphantsi, isolo sabonakala ngathi sisikhalazo esingaviwa. Kwiminyaka eyi-10, ngaphezulu kwama-40% wentetho yakho yabucala isabonakala.
Amaxesha amaninzi xa umntwana Ujongene nomsebenzi omtsha ofunda ezi zinto zinengxaki ngokuvakalayo ezingenakuqondakala ngakumbi kuye. Njengoko befumana amandla, intetho yabucala iba kukumbombozela okungavakaliyo. Xa sele ekwenzile umthambo, umntwana ufunda ukwenza imisebenzi yokuqonda ngelizwi eliphantsi, emva koko ahambe athule.
Ungaziphatha njani njengomama xa uthetha nomntwana wakho yedwa
Njengoko kuthethwe yedwa sisixhobo sokusombulula ingxaki. Ingakumbi kula makhwenkwe kunye namantombazana akhula kwindawo yokucebisa kunye neyentlalontle. Umntwana ubandakanya ulwimi aluva kwabadala kwincoko yakhe.
Ukumamela iingxoxo zabantwana bakho, abazigcina bodwa okanye nezihlobo zabo ezizicingelayo, unokufumana ulwazi ngakumbi malunga nezicwangciso zabo, iinjongo kunye nobunzima. Kuya kuba lula kubo ukuveza ngokukhululekileyo into abayifunayo ngokungaziva bebuzwa. Ukuba, ngenxa yobudala babo, babhenela kakhulu kwintetho yangasese, ngokuqinisekileyo bafuna inkxaso eyongezelelweyo kunye nesikhokelo.
ULaura E. Berk noRuth A. Garvin baqhuba isifundo nabantwana abaphakathi kweminyaka emi-5 ukuya kweli-10 ubudala apho bayangqinelana noko Ukuziqhelanisa nokuzimela ngowona msebenzi uphambili wesoliloquy. Abantwana bathetha bodwa rhoqo xa besebenza bodwa kwimisebenzi enzima ootitshala babo abangakwaziyo ukubanceda kwangoko. Iisoliloquies ziyehla njengoko ukusebenza kusanda.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Phuhliso » ekufundeni » Unyana wam uthetha yedwa, ngaba yinto eqhelekileyo le?